Lehilahy miray amin’ny lehilahy ny lehilahy ao amin’ny mareva-doko, ny fanjelanjelatry ny tontolo izao ny Pelaka trano Fisotroana tao Berlin na Cologne maro ny fahafahana mitovy tokan-tena hihaona. Ny iray amin’ireo fanamby amin ny maha-olona Tokana, na izany aza, dia ireo tokan-tena, ny sivana, ny faniriana ho an’ny maharitra, fiaraha-miasa matotra. A bebe kokoa ny olana amin’ny»izy no mitady azy izy»-dia ny fiainana mpiara-miasa, ny fampitahàna fifantenana ny mety ho mpiara-miombon’antoka. Indrindra ao amin’ny faritra ambanivohitra, ny fahafahana dia mitovy olona Iray hahafantatra rar. Na izany aza, na dia eo aza ny zava-tsarotra rehetra, dia misy ihany koa ny mamirapiratra toerana ho an’ny»izy no mitady ny azy»ny fikarohana ny mpiara-miasa Nandritra ny taona maro, ny fomba ny fiaraha-monina fiovana indrindra fa any amin’ny tany Tandrefana. Ao amin’ny tanàn-dehibe ny fitsarana an-tendrony, raha oharina amin’ny lehilahy miray amin’ny lehilahy mpivady na ny tokan-tena — ny iray amin’ireo dingana maro amin’ny fanantenana ho an’ny ho avy ny mitovy taovam-pananahana ny fitiavana. Ianao ka Tokan-tena ary tsy mbola hita fotsiny ny olona tonga lafatra ho an’ny fandalinanao manokana ny fahasambarana. Avy eo ny fiainana mpiara-miasa amin’ny Fiarahana amin’ny Aterineto ny zavatra Tsara ho anareo — ato ianao hianatra ny antony. Koa satria maro ny olona Iray dia mitady ny nofy ny olona an-tserasera izany andro izany, ny fifantenana ny safidy, Fa na»ny olona mitady lehilahy»na»izy no mitady azy»-kely ad, Mampiaraka toerana na matchmaking — diniho voalohany izay misy ny laharam-pahamehana lainga. Ianao adventures in naharitra ela ny Tokan-tena na amin’ny lehibe fifandraisana amin’ny olona liana. Maro ny Fiarahana amin’ny Aterineto sy ny sehatra ho an’ny gay tokan-tena mba hankafy ny mampiahiahy laza ho iray El Dorado ho an’ny Firaisana ara-nofo nahafinaritra. Satria ny tokan-tena dia mila tsindrio araka ny fisoratana anarana amin’ny alalan’ny tsy tambo isaina ny Mombamomba, ary mifarana ity hanana zava-kendrena amin’ny fikarohana, matetika amin’ny endrika ivelany fotsiny ny fifandraisana. Toy ny olona izay tsy mikatsaka afa-tsy ny Flirts, ianao dia hahita haingana izany. Fa ny maha-pelaka Iray mitady ny lehibe, fifandraisana maharitra tsy maintsy miaraka amin’ny Tolotra maimaim-poana, tsy hahomby. Ihany no zara raha manana ny fahafahana iray no misy, mivantana ny mombamomba Tokan-tena mitady olona fa dia tena ny maha-izy azy sy ny zavatra ilaina. Ve ianao te-hahita ny tonga lafatra ny olona ho amin’ny fifandraisana matotra. Dia fanohanana an-Tserasera ny Fiarahana toy ny Amerikana Mampiaraka, Fiarahana tonga lafatra.
Mampiaraka An-Tserasera toy ny Amerikana Mampiaraka eases ny Fiarahana amin’ny lehilahy pelaka amin’ny lafiny maro: izy ireo no tsy te-hitady ny Tokan-tena-ny olona ao amin’ny haystack.
Ny tombony ny Fiarahana ao American Mampiaraka amin’ny an-Tsipiriany
Ny Fiarahana amin’ny Aterineto ho an’ny Amerikana Mampiaraka dia manomboka amin’ny Mameno ny toetra test. Noho izany dia hahafantatra bebe kokoa momba ny toetra, ny faniriana sy ny fitakiana, rehefa mifidy ny mpiara-miasa. Mifototra amin’ny vokatra ireo, dia soso-kevitra ho anao ny mety ho Tokan-tena, izay mety ho lafiny rehetra ho azy ireo.
Eo amin’ny tokan-tena maro tany Alemaina ianao mitady olona Tokana izay lehibe. Manararaotra ny tombontsoa azo avy amin’ny Fiarahana Amerikana. Satria isika hampiasa ihany ny tokan-tena voasoratra anarana, dia ho mendrika ny ho lehibe, maharitra ny fiaraha — miasa isika hampiditra anao any aminy amin’ny Endrika mpiara-miasa tolo-kevitra. Ao ny raharaha ny Amerikana Mampiaraka pelaka tokan-tena avy any ambanivohitra hianatra ny olona ao amin’ny faritra misy anao, na ny manontolo Alemaina online — afaka mamaritra hoe hatraiza ny hoavy vady ho an’ny fiainana dia navela ho velona.
Izahay dia manolotra ho anao tokan-tena araka ny irina fepetra
Isan ny zavatra mponina pelaka — mahita eo aminy ny pelaka, fitiavana ny lehilahy iray izay tena mifanaraka ianao, dia tsy mora. Na izany aza, amin’ny raharaha American Mampiaraka tsy search aimlessly ho Mpiara-miasa
← Toerana ho an'ny fifandraisana matotra
Mba hihaona ny ankizivavy →